फिलिपिन्स, मनिला र उच्च समाज । - ब्राजिल भिडियो च्याट - Bate-Papo!
फिलिपिन्स, मनिला र उच्च समाज ।
म बुझे एक पटक मा
आज, महिमित राज्य फिलिपिन्समा को छ हाम्रो एजेन्डा, किनभने हामी कल गर्न प्रयोग -मनिला र -मनिला अतिथि गर्मी मायस प्रतिवेदन प्रस्तुत तीन घटक को मनिला, शहर को को एन्जलस र द्वीप को, तर बोराके समुद्र तट. त्यसैले, तपाईं देख्न अधिक चालीस फोटो तस्बिरहरू को तीन घटक को देश: फोहोर, विकसित वेश्यावृत्ति र सुन्दर समुद्र तट छैन भनेर पर्ची मा पहिलो र दोस्रो घटक । म भने के सबै एक द्वारा एक, म प्राप्त अल्छी छैन किनभने म धेरै राम्रो महसुस लागि एक महिना र एक आधा को एक ब्रेक बिना. ट्याक्सी देखि हवाई अड्डा माध्यम यात्रा थियो, को आसपास क्षेत्र. मिनेट, केही हुन सक्छ पाइएन । अन्तमा फेला हाम्रो होटल आधा संग वार्ता । त्यहाँ हरेक विस्तार को एक मातेको विदेशी दम्पतीले आफ्नो हतियार छ । मनिला हुन लागे, एक अद्भुत शहर भनेर म मन पर्यो । हुनत यो सधैं थियो साफ, यो को, समुद्र र सामान्य वातावरण थियो, अत्यन्तै अप्रिय.
त्यसैले तिनीहरूलाई अधिकांश सुतेको थिए.
म चाहन्थे, सायद देखाउन, मनिला को एक प्रकारको रूपमा राज्य को आशा, तर, परमेश्वरले केही भयो । एक मानिस त्यहाँ छ यहाँ । भने पनि उहाँले सधैंभरि परिवर्तन संग, एक कलम बारे तपाईं सबै आफ्नो अनुहार भन्दा - एक सानो भन्दा बढी एक वर्ष पहिले, उहाँले एक लक्ष्य थियो, र अन्तर्गत को छाप कि लक्ष्य छ, उहाँले रोकियो काटन आफ्नो कपाल र उठे खैर, कम से कम जब मेरो खुट्टा रुचि थिएन । सुन्दर फिलिपिनो मूर्तिकला. म अझै पनि शङ्का छ: यो बर्बरता वा केहि जस्तै । यो बच्चा छैन दुवै हात, आमा पनि धनी मा एक भन्दा बढी पन्जा, एक सानो कुकुर र बिना एक पन्जा, पिता को परिवार मा पूर्ण फिट समग्र तस्वीर । केही बनाउँछ आनन्दित नृत्य बारेमा कसरी यो मा निहित को हृदय जूता स्टोर. ओह, यो ठूलो कला को फिलिपीन द्वीप, अज्ञात र रहस्यमय छ । उनको जूता भने त्यो पाता एक हात. तर छन्, सुन्दर, उज्ज्वल, र जो कसैलाई लागि हेर्न छैन.
तर पनि तिनीहरूले बचाउन सक्दैन मनिला बादल दिन मा.
खैर, यो साँचो हो, सबै फोटो साँचो हो । वास्तवमा, यो थियो धेरै बुरा छ । हामी बसे एकदम टाढा मुख्य ठाउँमा"चेतना". होटल थियो भनिन्छ नीलो क्षेत्रहरु, र यो थियो एक पूल घेरिएको भियतनाम घेरिएको जवान मान्छे । यी बालिका, एक रूपमा शासन, खुसी सबैलाई लाइन मा खडा गर्ने. अमेरिकी लागि आफ्नो प्रेम र हेरविचार । यो थियो छैन लागि भुक्तानी पछि । यो सम्म देखिन्थ्यो कि मलाई यो थिएन । म यो आनन्द.
घुँडा सबै योग्य नै
यो अक्सर छैन भनेर तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् सस्ता लागि सेट एक अमेरिकी चलचित्र हो । म छु छैन आश्चर्यचकित सूची को ट्विन शहर लास भेगास. कुनै अन्य शहर थियो, यस्तो स्पष्ट संग संगत शब्द"प्वाल।"शहर तल्ला । तपाईं कहिल्यै कि भावना प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ", छुरी हान्नु र मार्न भूल"वा बस चाहनुहुन्छ पार गर्न एक जबकि लागि (वा सधैंभरि), त्यसपछि निःस्वार्थ भई नष्ट आफ्नो आदर्श. एक सामान्य व्यक्ति के गर्न केही छ यहाँ । तर यात्रा को बाहिर शुद्ध जिज्ञासा पनि हुन सक्छ मजा । यो परिषद । होटल भएको थियो कि ध्यान चयन पहिले दिन थियो भनिन्छ नीलो. फोटो साइट मा पूरा को परिभाषा"शुद्ध"विज्ञापन को घर भाडा देखि रूसी. तर म थियो एक परिकल्पना छ कि यस्तो शहर तपाईं बस गर्न आवश्यक बसोबास, र यो न्यायसंगत छ । बिस्तर सनी जस्तै सफा गर्न स्पष्ट पारदर्शिता कि. एक हावा कंडीशनर निर्माण पर्खाल मा देखिन्छ कि मौखिक र पात लागि कुनै कोठा कुराकानी, र नै समय मा, एक कोठा मा, एक रेडिएटर जंगला शताब्दीयौंदेखि लागि. यस्तो ठाउँमा, मुख्य कुरा छैन प्राप्त गर्न सचेत. म माथि जगाए एक अतिथि रूपमा, तुरुन्तै मिल्यो मादक पदार्थ सेवन, जाँच मेरो पासपोर्ट, गन्न मेरो नगद लिएर मेरो ल्याप्टप अन्तर्गत देखि बाहिर डसना, र हेर्नुभयो, मेरो मनपर्ने अमेरिकी चलचित्रहरू मा प्रासंगिक विषय । तथापि, म एक सानो. पनि आगंतुकों लुगा उल्टो मा, जस्तै. थियो भने यो"सजिलो"एक केटी लागि, त्यसपछि त्यो भए जा - सामान्य. तर, एक सस्तो फिलिपिनो क्याथोलिक खुसी प्राण छ जो एक भान्सा मा एक अलग कोठा र एक प्रजनन को अन्तिम रातीको अन्तिम खाना पर्खाल मा फांसी. भान्सा तालिका मा, केही अतिथि, एक पार्टी, कुनै कम । बेलगाम सडक विक्रेताहरु प्रस्ताव आफ्नो ट्रे र चुरोट. प्रत्येक घर मा बारहरू द्वारा आकर्षित सुन्दरता । तर, म भने, छली गर्न आँखा । सबै भन्दा सुन्दर प्रदर्शनकारी वस्तुहरु को लागि काम महिलाको मात्र लोभ्याउन ग्राहक भित्र, पहिलो पङ्क्ति मा, केहि को लागि देख प्रस्तुत गर्न पोडियम मा वा पट्टी मा, गर्न इच्छा हाई गर्नु. तिनीहरूलाई अधिकांश छन् त्यहाँ उभिरहेका र पनि प्रयास गर्न कुनै तरिका ध्यान आकर्षित गर्न आफूलाई । यदि तपाईं अचानक जस्तै (खैर, पर्याप्त छैन भने, तपाईं स्वाद।) जो कसैले तपाईं जस्तै, तपाईं तिर्न स्थापना शुल्क, जाने र केटी संग जहाँ तपाईं चाहनुहुन्छ. त्यसैले प्रारम्भिक । किन्न संस्थाहरु, पैसा छ भने - म संग प्राप्त गर्न सक्छन् कुनै पनि को स्थानीय तपाईं संग. तिनीहरूले रुचि राख्नु हुन्छ, आफ्नो उमेर, आफ्नो सामाजिक स्थिति, र सबै कि. तर तपाईं भने एक विदेशीले, यो मतलब आनन्द सम्भव छ. डेटिङ मा फिलिपिन्समा आफ्नो सपना । तर केवल तिर्खा लागि पैसा रूपमा, क्युबा मा, म याद थिएन । तपाईं एक महान उपाधि बिना, एक टाउको संग र एक उत्कृष्ट ज्ञान को अंग्रेजी भाषा । ती जसको उमेर अझै भएको र गएका किनभने को प्रस्थान को एक विदेशीले, अन्ततः विवाह - एकै समयमा, तिनीहरूले थिए नितान्त. तर चाँडै आफ्नो समय आउनेछ । किनभने यो देखिन्छ कि मलाई यो ठीक छ एन्जलस छ कि गोले संग जो अमेरिकी (र छैन बस भनेर तिनीहरूलाई एक मुद्रा र जवान मान्छे) सरुवा छन् द्वीप को प्रतिशत जोडे गर्दा ठीक तिनीहरूले छन् र एक. अरू सबै चिनियाँ छ । चिनियाँ मा-यो-समुद्र । खैर, कम से कम यो गर्दैन जान समुद्र । तिनीहरूले पालन फोटो मा एक पूर्ण अनपेक्षित तरिका मेरो लागि, एक ठाँउ विश्राम को समुद्र द्वारा. म पनि लाग्यो खरीद बारे एक डसना को रूप मा स्पंज-बब. तर भ्यागुता आए र. तस्वीर केहि - कसरी गरे यी फोटो देखा? हो, म देख्न, अब उहाँले देखिन्छ मा चिसो को मास्को. समयमा यी दस दिन मा फिलिपिन्समा, यो देखिन्छ कि मलाई म सबै देखे, यो देश मा देखे र केही नै समय मा. र यो छ एक राम्रो कारण गर्न फिर्ती । किनभने ठीकै भन्नुभयो: पछि मेरो यात्रा गर्न फिलिपिन्समा, म साँच्चै क्षमा गर्न चाहनुहुन्छ गर्ने सबैलाई सम्झना छ मलाई कि म सधैं जस्तै पारित गर्न न्याय मा आफ्नो सामाग्री. आफ्नो टिप्पणी गर्दै बस रूपमा महत्त्वपूर्ण रूपमा मलाई यी सामाग्री, जो लाग्न आत्म-पर्याप्त छ । र, को पाठ्यक्रम. तपाईं गणना गर्न सक्छन् कसरी धेरै मानिसहरू पुग्नेछौँ मास्को देखि बोराके, उदाहरणका लागि, तल लिंक प्रयोग. र बोल्ने को अमेरिकी वरिष्ठ र छ - छैन लायक कुनै बेकम्मा, म कुरा गर्न मनिला संग शिविर बालिका (डरावना रूपमा मृत्यु) - त्यहाँ भाडा ज्यादातर को लागि र नीलो, ओछ्यानमा मा राम्रो, र पनि छैन बाढ़ । हो, त्यसैले म निर्णय गर्न अन्तमा पाउन ख्याति र लोकप्रियता छ । यी सबै यात्राको योगदान छैन भन्ने तथ्यलाई गर्न, त्यसपछि सायद, पनि जन्म दिन बिरालोको बच्चाहरुको. म खुसी छु सबै संग रूस मा आफैलाई. साथै, उनको अंग्रेजी कौशल भन्दा धेरै उच्च हो मेरो । कुनै आपसी समझ छ ।.
निःशुल्क लागि डेटिङ पुरुष र डेटिङ एजेन्सी बेल्जियम मा
Kaduna Dating site, zware relaties voor gratis Dating
भिडियो च्याट महिलाहरु भिडियो च्याट भिडियो च्याट प्रसारण मुक्त लागि च्याट जोडे डेटिङ बिना फोटो भिडियो डेटिङ लागि मुक्त भिडियो डेटिङ साइट निःशुल्क पूरा फ्री भिडियो च्याट कोठा बिना दर्ता विवाहित महिला पूरा गर्न विज्ञापन